Shivaraj Online | के पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले तालिबानलाई समर्थन गर्छन् ? - Shivaraj Online के पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले तालिबानलाई समर्थन गर्छन् ? - Shivaraj Online
के पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले तालिबानलाई समर्थन गर्छन् ?
काठमाण्डाै – पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले अफगानिस्तानले गुलामीको साङ्लो तोड्न सफल भएको बताउनु भएको छ ।
विद्रोही समूह तालिबानले अफगानिस्तानलाई कब्जामा लिएसँगै त्यहाँको अवस्था के होला ? भन्ने चासोकै बीच खानको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो ।
इस्लामाबादमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले अफगानिस्तानले गुलामीको साङ्लो तोडेको तर संसारमा रहेको दासत्वको साङ्लो भने टुट्न नसकेको बताउनु भएको हो । उहाँको यो अभिव्यक्तिको चर्चित लेखक तसलिमा नसरीनले भने आलोचना गर्नु भएको छ ।
उहाँले भन्नु भएको छ – ‘प्रधानमन्त्री इमरान खान तालिबानलाई माया गर्नुहुन्छ, समर्थन गर्नुहुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अफगानिस्तानमा तालिबानले गुलामीको साङ्लो तोड्यो । के हुन्थ्यो होला, यदि इमरान खानको दुई छोराको साटो दुई छोरी भएको भए अनि उनीहरु बेलायतको साटो अफगानिस्तानमा बस्थे ?’
बङ्गलादेशमा जन्मिएकी तसलिमा नसरीनले अधिकारको क्षेत्रसहित साहित्यमा कलम चलाउँदै आउनु भएको छ । उहाँले अहिले निर्वासित जीवन बिताइरहनु भएको छ । समसामयिक विषयमा आउने तसलिमाले टिप्पणीले तरङ्ग ल्याइदिने गरेको छ ।
धेरैजसो समयमा उहाँको टिप्पणी विवादमा पर्ने गरेको छ । उहाँको पछिल्लो टिप्पणीमा पाकिस्तानले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । पश्चिमा राष्ट्रले पाकिस्तानमाथि विद्रोहीको संरक्षण गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।